> Hofisi Depot fekitori Kuongorora
Sehunyanzvi uye neyakareba rakabatana hukama mupiki, isu tichiri kufanira kugamuchira fekitori Audit kubva kuOffice Depot, iwo mutemo wekambani, kunyangwe iwe uri mutengesi wegoridhe! sezvamunoziva, Office Depot ndiyo yepasi rose kambani mazana mashanu, kambani hombe yemaketani ekutengesa! Ivo vanogara vachiremekedza mutengi wese kubva kwavari, vachiomerera pakukurumbira kweHofisi Depot! ivo vanotengesawo zvigadzirwa-zvinokosheswa zvakanyanya kune vanhu voga voga, saka isu tinofanirwa kushandira navo chero nguva uye chero chavanoda kuita!
Pakutanga kwemwedzi uno, takawana meseji kubva kuOD yekuti vanozotumira UL kuti ive neFekitori Audit panguva ino, nei vachishandisa UL, sezvamunoziva, UL ine nhoroondo-refu yakamira mukubvumidzwa uye kusimudzira kwemiyero kunovaita pfungwa yakavimbika vatungamiriri munzvimbo inoteera vateereri vanovimba navo kutsvagurudza, ruzivo uye matekinoroji ekugadzirisa nyaya dzekuchengetedza uye kuraira matekinoroji matsva, vakazvipira Global Security uye Brand Protection timu inoshanda nezviremera nemasangano epasirese epasi pamatanho ekurwisa manyepo. Uye zvakare ivo vanopa kuyedza kwepasirese uye setifiketi mhinduro dzekugamuchirwa muNorth America, Latin America, Europe, Middle East neAsia.
Kunyangwe ikozvino iri mwaka wepamusoro wepamusoro, uye mutsetse wekugadzira wakabatikana zvakanyanya mazuva ese, isu tinotora nguva uye tinoshanda pamwe neUL kuti tiite zvese kuongororwa kuti tikwanise kupa mutengi wedu OD mhinduro yakanaka, uye usambonetseka nezve mamiriro efekitori. uye tenda isu tiri akavimbika uye epamusoro-mukurumbira weOD! Panguva ino tinotarisira kuvaka hukama nekudyidzana pamwe neshamwari nyowani, chero nguva uye chero zvaunoda, ndapota usazeze kutaura nesu, tinogara takakumirira iwe online!